Wasiirka Arrimaha Dibadda Iiraan oo ka qeybgalay shirka waddamada G7 - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaWasiirka Arrimaha Dibadda Iiraan oo ka qeybgalay shirka waddamada G7
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa shalay oo Axad ahayd isaga oo aan horey loo sii shaacin si lama filaan ah oo aan rasmi ahayn uga qeybgalay shirkladda waddamada G7 ee ka dhacayay dalka Faransiiska.
Maxamad Javad Zarif ayaa shirar barbar socday shirka madaxda G7 ee ka dhacayay Biarritz la yeeshay madaxda qaar ee caalamka.
Madaxda ka qeybgalayay shirka Biarritz ee waddamada G7 waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Wararka qaar ayaa sheegaya in wafdiga Mareykanka ay la fajaceen booqashada Zarif, xilli xiisad aad u xooggan ay ka dhex jirto Mareykanka iyo Iran.
Maxamad Javad Zarif ayaa qoraal uu soo dhigay boggiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in uu wadahadal muhiim ah la yeeshay dhiggiisa dalka Faransiiska iyo waliba madaxweynaha dalkaasi.
Waxa uu sidoo kale sheegay in si wada jir ah uu kulan ula yeeshay mas’uuliyiin ka socda Britain iyo Jarmalka.
Zarif ayaa sidoo kale Jimcihii magaalada Paris kula kulmay madaxweyne Emmanuel Macron, ka hor inta uusan furmin shirka G7.
Xiriirka u dhaxeeya waddamada Iran iyo Mareykanka ayaa aad u xumaaday tan iyo markii sanadkii la soo dhaafay xukuumadda Washington ay isaga baxday heshiiskii hubka Niyuukleerka ee sanadkii 2015-kii ay Iran la gashay waddamada caalamka.
Shan waddan oo kale oo Faransiisku uu ka mid yahay ayaa wali ku sii jira heshiiskaasi oo aan ka bixin, balse Iran ayaa billowday in ay dardargeliso hawlaheeda niyuukleerka, arrintaa oo ay uga falcelinayso xayiraadaha dhaqaale ee uu Mareykanka mar kale ku soo rogay.
Madaxweyne Macron ayaa door muhiim ah ka qaadanayay sidii la isugu dayi lahaa in la dejiyo xiisadda u dhaxeysa Mareykanka iyo Iran, isla markaana loo badbaadin lahaa heshiiskii quwadaha caalamka ay la galeen dalkaasi Iran, balse xiriirka Iran kala dhaxeeya waddamada reer galbeedka ayaa bilihii u dambeeyay sii xumaanayay ka dib maraakiib ay dhinacyadaasi ku kala qabsadeen marinka muhiimka ahi ee Hurmuz.
Wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamad Javad Zarif ayaa qudhiisa bishii la soo dhaafay lagu soo rogay xayiraad, waxaana Mareykanku uu ku eedeeyay in si indha la’aan ah uu u dhaqan geliyay ujeeddooyinka hoggaamiyaha dalkaasi Iran.
Macluumaadka la xiririra booqashadiisa uu ku tagay dalka Faransiiska ayaa ah kuwo is-khilaafaya. Mas’uuliyiinta dalkaasi Faransiiska ayaa warbaahinta u sheegay in Mareykanka iyo Fransiiska ay heshiis ku ahaayeen in la marti qaado Maxamad Javad Zarif balse saraakiil ka tirsan aqalka Cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa sheegaya in si lama filaan ah uu halkaasi ku yimid.
Sidoo kale waxaa jiray hadallo is-khilaafsan oo ka soo baxayay madaxweyne Macron iyo madaxweyne Trump, kuwaasi oo ku saabsanaa in hoggaamiyeyaasha waddamada G7 ay ku heshiiyeen iyo in kale, in si wada jir ah loo wajaho sidii loo qaboojin lahaa xiisadda Mareykanka kala dhaxeysa Iraan.
Mar sii horreysay shalay oo Axad ahayd ayaa madaxweyne Trump waxa uu u muuqday mid ku gacanseyraya dedaallada Faransiiska uu ku doonayo in uu labada dhinac ku dhex dhexaadiyo.
Hoggaamiyeyaasha waddamada ku bahoobay G7 ee Britain, Canada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japan iyo Mareykanka ayaa waxaa dalka Faransiiska ay isugu yimaadeen shirkii 45aad ee ururkani, waxaana ay ka wada hadlayeen arrimo badan oo ay ka mid yihiin heshiis dhanka niyuukleerka ah iyo ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub.
Ilhaan Cumar Oo Ka Hadashay Burburinta Ay Ciidamada Kenya Ku Hayaan Shirkadda Isgaadhsiinta Ee Hormood